Sacuudi Carabiya: Prince Matib bin Cabdullahi oo la sii daayay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Sacuudi Carabiya: Prince Matib bin Cabdullahi oo la sii daayay
Sacuudi Carabiya: Prince Matib bin Cabdullahi oo la sii daayay
Prince Matib bin Cabdullahi bin Cabdulasis oo ahaa wasiirka ciidanka Ilaalada Qaranka Sacuudiga oo la sii daayay
Dowladda Sacuudiga ayaa sii daysay wasiirkii hore ee Ciidamada Illaalada Boqortooyada Sacuudiga Prince Matib bin Cabdullahi, kaasi oo ka mid ahaa madax sare oo ka tirsan qoyska reer boqor oo muddo xirnaa.
Prince Matib bin Cabdullahi ayaa muddo ka badan Saddex toddobaad xirnaa isaga oo loo haystay eedaymo la xiriira musuq-maasuq.
Matib, oo 65 sano jir ah ayaa ka mid ahaa 11 qof oo qoyska reer boqor ka tirsan Afar Wasiir iyo wasiiro hore kuwaasi oo si lama filaan ah loo xiray ka dib markii boqortooyadu ay Ku dhawaaqday guddiga la dagaalanka musuq-maasuqa, kaasi oo gebi ahaanba ruxay gayiga Sacuudiga.
Waxaa mas’uuliyiintan lagu eedeeyay Lunsasho hantiyadeed iyo wax is daba-marin.
Prince Matib, walaashiis oo la yirahdo princess Na’uf bin Cabdullahi ayaa marka wasiirkaasi hore lasoo dayay waxaa ay tiigsatay barteeda Twitter-ka.
“Ilahay ayaa Mahad leh, ama ‘Alxamdulillah’ miyaad ii caafimaad qabtaa” ayay soo qortay ayadoo qoraalkeeda soo raacisay Sawirka walaalkeed Prince Matib bin Cabdullahi bin Maxamed bin Cabdulasiis al-Sacuud.
Cabiir bintu Khaalid bin Cabdullahi oo uu Prince Matib adeer u yahay ayaa ayaduna sidoo kale fariin qiiro Twitter-keeda kusoo qortay.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا 🙏🏼❤️🙏🏼
الله يطول عمرك و يعطيك طولة العمر بالصحة و العافية و يخليك لنا ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/3CEDqrb8zm
Matib, waxaa dhalay boqorkii hore ee dalka Sacuudiga Boqor Cabdullahi bin Cabdulasiis al-Sacuud waana ina adeerka Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada islamarkaana uu dhalay boqorka haatan xilka haya ee Salmaan bin Cabdulasiis al-Sacuud.
Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada ayaa lagu badalay ina adeerkiis Maxamed bin Nayiif.
Waragsigii ugu dambaysay ee uu bixiyay Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa uu ku sheegay in inta badan mas’uuliyiinta xuriyadda laga qaaday arintooda heshiis laga gaaray.
Ujeedada ayaa loo malaynayaa in madax ay xukuumadda Ku raacaan howlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo xal-abuurka dhaxal-sugaha.
Warbaahinta Bloomberg, oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegaysa in Prince Matib la sii daayay kadib markii uu ogolaaday inuu bixiyo adduun gaaraya $1b oo dollar-ka Maraykanka ah.
Wakaaladda wararka Reuters oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa qortay in heshiiska laga doonayo xubnaha xiran inay qayb ka tahay wareejinta Hanti maguuraan ah iyo lacag caddaan/ Kaash ah.
Dadkan ayaa si rasmi ah xabsi ugu jirin hase ahaatee lagu hayo mid ka mid guryaha boqortooyada.
Olalaha la dagaalanka musuqmaasuqa Sacuudiga ayaa qal-qal galiyay guud ahaan dhaqaalaha adduunka, waxaana Sabah u ah in dadka la xiray uu ka mid yahay mid ka mid ah dadka ugu qanisan Caalamka.
Previous articleKuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay Maraykanka duqayn karto
Next articleMaxaad ka taqaanaa amiir Alwaliib bin Talaal?